Mpanamboatra tavoahangy ilaina amin'ny vera, mpamatsy - Sinaina tavoahangin-tsolika tena ilaina ao Shina
Tavoahangy fitetezana tavoahangy vita amin'ny vera manga cobalt 100ml misy saron-tratra CR zaza
Mampiasà tavoahangy misy satroka pipeta fitaratra hitahiry vokatra sy vahaolana isan-karazany, ao anatin'izany ny menaka manitra sy ny menaka mitondra, ny hanitra, ny fitsaboana voninkazo Bach, ny vahaolana ara-pahasalamana ary maro hafa. Ny vera manga dia fomba tsotra sy mahomby hanomezana ny vokatrao fisehoana avo lenta, ka hiantohana fa mialoha ianao sy ny vokatrao alohan'ny fifaninanana sady manintona ny sain'ny mpanjifa mety.
Tavoahangy fitaratra mazava 50ml miaraka amina paompy vita amin'ny alimo volamena
Arovy, asehoy ary atsipazo ao anaty tavoahangy fitaratra ny hanitrao sy ny menaka manitra. Ity tavoahangy famafazana vera 50ml ity dia an'ny andian-dranonay ary mety tsara amin'ny vokatra ara-pahasalamana sy ara-panafody. Ny fitaratra mangarahara dia afaka manatsara ny haavon'ny vokatra sy ny fahitana. Tena mety aminao sy amin'ny mpanjifanao ny manavaka haingana ny tsiro / fofona isan-karazany. Ny ilan'ny tavoahangy mahitsy dia mora ny manampy ny fanononanao manokana / fanontam-pirinty.
Tavoahangy tena ilaina vera maintso 20ml misy rakotra fanamainana reducer orifice
Ny andian-tavoahangy tavoahangy fitetezana fitaratra dia hiantoka fiarovana tsara amin'ny vokatrao, fisehoana tonga lafatra ary vonona ho an'ny mpanjifanao. Ity tavoahangy vera maitso 20ml misy kapila ity dia toa tsy mahavariana, fa manome fomba tsara indrindra hizarana ny vokatra tsara kokoa. Izany dia vokatry ny fampidinana tsimoramora ao anaty satroka, izay mamela ny vokatrao halefa amin'ny endrika vongan-drano. Tena mety amin'ny menaka manitra lafo vidy sy ny aromatherapy mifangaro.
Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy paompy fitaratra,